सस्तो ICE ट्रेन टिकट र यात्रा मार्ग मूल्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
सस्तो ICE ट्रेन टिकट र यात्रा मार्ग मूल्यहरू
घर > सस्तो ICE ट्रेन टिकट र यात्रा मार्ग मूल्यहरू
यहाँ तपाईं जर्मनी को बारे मा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो ICE ट्रेन टिकट र ICE यात्रा मूल्यहरू र लाभहरू.
शीर्षकहरू: 1. ICE ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा
2. ICE ट्रेनको बारेमा 3. शीर्ष इनसाइटहरू सस्तो ICE ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
4. ICE टिकट कति खर्च हुन्छ 5. यात्रा मार्गहरू: किन यो राम्रो छo ICE ट्रेन लिनुहोस्, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
6. ICE मा मानक कक्षा र प्रथम श्रेणी बीच के भिन्नताहरू छन् 7. त्यहाँ ICE सदस्यता छ
8. कति लामो आईसीई ट्रेन प्रस्थान पहिले आइपुग्न को लागी 9. आईसीई ट्रेन कार्यक्रम के हो?
10. कुन स्टेशनहरू ICE द्वारा सेवा पुर्‍याइन्छ 11. ICE ट्रेन FAQ
ICE ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा
जर्मनीको सब भन्दा द्रुत ट्रेन आईसीई रेल हो k०० किमी / घण्टाको गतिको साथ.
Tउहाँ जर्मन रेल प्रणालीको प्रमुख ICE ट्रेन जर्मनी भित्र प्रत्येक शहर जोड्दछ.
सबै ट्रेनहरूको जुन चालु छ जर्मन रेलवे प्रणाली, ICE श्रेणी A को सम्बन्धित छ.
ICE ट्रेनहरू हवाईजहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डिजाइन गरिएको छ आराम र समयको गन्तव्यमा.
आईसीईको अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा फ्रान्स समावेश छ, बेल्जियम, डेनमार्क, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड्स, र स्विट्जरल्याण्ड.
ICE ट्रेनको बारेमा
इन्टर्सिटी-एक्सप्रेस वा यसको सर्टकट नाम आईसीई एक प्रणाली हो उच्च गतिको रेल ड्युश बहन द्वारा स्वामित्व प्राप्त, जर्मनीको राष्ट्रिय रेल प्रदायक. द ICE ट्रेनहरू लक्जरी को लागी परिचित छन्, गति, र सान्त्वना तिनीहरू जर्मनीको प्रत्येक शहरमा जडान गर्दा.
प्रति घण्टा k००km को रूपमा उच्चको साथ, ICE ट्रेन द्वारा यात्रा कोलोन र ह्याम्बर्ग जस्ता टाढाका शहरहरू बीच यात्रा गर्न सब भन्दा छिटो मार्ग हो.
ICE यात्रा मार्गहरू जर्मनीमा सीमित छैन. ट्रेन अष्ट्रिया जाने अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरूमा दौडिन्छ, फ्रान्स, बेल्जियम, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, र नेदरल्याण्ड.
जाऊ त्यहाँ एउटा ट्रेन होमपेज बचत गर्नुहोस् वा खोजी गर्न यो विजेट प्रयोग गर्नुहोस् आइस ट्रेनहरूको लागि टिकटहरू
शीर्ष इनसाइटहरू सस्तो ICE ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
नम्बर 1: तपाईको आईसीई टिकट अग्रिममा बुक गर्नुहोस् जतिसक्दो चाँडो
यदि तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने सस्तो आईसीई टिकटहरू, पहिले तपाईं तिनीहरूलाई किन्नुहोस्, सस्तोमा उनीहरूको सम्भावना बढी हुन्छ. छन्3सस्तो आईसीई भाडाका प्रकारहरू र सबै तीन टिकट प्रकारहरू प्रारम्भिक बिक्री समयमा उपलब्ध छन्, तर सेभर भाडा, अर्थव्यवस्था मूल्य, र सुपर स्पार्पिस उपलब्ध नहुन सक्छ किनकि प्रस्थान दिन नजिकि आउँछ. तपाईं सकेसम्म चाँडो सेभर भाडा टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ6प्रस्थान अघि महिनाहरु.
नम्बर 2: तपाईंको ICE ट्रेन टिकटहरू अर्डर गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो यात्रा कार्यक्रमको निश्चित हुनुहुन्छ
तपाईंको यात्रा र प्रस्थान मिति निश्चित भएकोले तपाईंलाई फिर्ती शुल्कमा पैसा बचत हुनेछ. फिर्ताको दर र अप्रयुक्त ICE टिकट फिर्ताको विकल्प तपाईले किन्नुहुने टिकटको प्रकारमा निर्भर हुन्छ. साथै, रिफन्ड शुल्क मानक भाडा टिकटहरूको भन्दा बचतकर्ता भाडा टिकटहरूको लागि कम छ. नोट गर्नुहोस् कि जब तपाईं आफ्नो टिकट फिर्ता गर्नुहुन्छ DB ले तपाईंलाई नगद फिर्ता गर्दैन. DB रकम फिर्ता DB वाउचर मार्फत गरिन्छ, जुन तपाईं उनीहरूले प्रदान गरेको कुनै पनि सेवाको लागि भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि बेच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ICE ट्रेन टिकट इन्टरनेट फोरममा अनलाइन यदि तपाईं पैसा फिर्ता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने.
नम्बर 3: अफ-पीक अवधिको अवधिमा ICE ट्रेन द्वारा यात्रा
ICE टिकट अफ-पिक-पीरियडमा सस्ता हुन्छन् (मंगलबार, बुधवार, बिहीबार, र शनिवार). चरम दिनहरूमा, सस्तो टिकट धेरै छिटो बिक्रि हुन्छ, फ्लेक्सप्रिस टिकट मात्र छोड्दै. शिखर दिनहरूमा यात्रा गर्न, सेभर भाडा टिकटहरू पाउन अग्रिम बुक गर्नुहोस्. यदि तपाईं सेभर भाडा टिकटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, ढिला बिहान र दिउँसो बिहानको बीचमा यात्रा गर्न निश्चित गर्नुहोस् (व्यापार यात्रुहरूको कारणले) फ्लेक्सप्रिस टिकट त्यति सस्तो हुने भएकोले. अन्ततः, यात्रा गर्नबाट जोगिनुहोस् सार्वजनिक र स्कूल बिदा आईसीई टिकटको मूल्य पनि बढ्ने थियो.
नम्बर 4: एक IV ट्रेन मा आफ्नो आईसीई टिकट किन्नुहोस्
हाम्रो वेबसाइटमा तपाईलाई आईसीई रेल टिकटहरूको सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव राख्नु हुनेछ, एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्. हामीसँग युरोप र विश्वमा रेल टिकटको सबैभन्दा धेरै प्रस्तावहरू छन्. हाम्रो अनगिन्ती रेल अपरेटरहरू र सहि एल्गोरिदमसँग, हामी तपाईंलाई सस्तो आईसीई टिकटहरू प्रस्ताव गर्दछौं जुन तपाईले फेला पार्न सक्नुहुनेछ. साथै, हामी ICE बाहेक अरू ट्रेनहरूको लागि सस्तो विकल्पहरू फेला पार्दछौं.
लिपजिग बर्लिन गाडिहरु गर्न
ICE टिकट कति खर्च हुन्छ?
ICE टिकटको मूल्य टिकटको प्रकार र तपाईंले चाहानुभएको सीटहरूको वर्गमा निर्भर गर्दछ. साधारणतया, जर्मन रेलवे यसको लागि प्रसिद्ध छ कम आईसीई टिकट मूल्यहरू. त्यहाँ ICE ट्रेन को लागी तीन टिकट प्रकार छन् - मानक वा Flexpreis टिकट, सुपरसाभर भाडा टिकट वा सुपरस्पर्पिस, र सेभर भाँडा वा स्पार्पेरिस आईसीई टिकटहरू. सेभर भाडा टिकटहरू मानक टिकटहरू भन्दा सस्तो हुन्छन्, तर उपलब्ध टिकटहरू प्रस्थान दिन नजिक आउने बित्तिकै कम हुनेछ. आईसीई टिकट मूल्यहरू तपाईले छनौट गरेको वर्गमा निर्भर हुनुहुन्छ र यहाँ प्रति वर्ग औसत मूल्यहरूको सारांश तालिका छ:
मानक 17 € – 50 € 30 € – 120 €
प्रिमियम 21 € – 70 € 58 € – 152 €
व्यापार 40 € – 87 € 80 € – 180 €
यात्रा मार्गहरू: किन राम्रो छ ICE ट्रेन लिन, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न?
1) प्रि-बोर्डिंग प्रक्रियाहरू वेवास्ता गर्नुहोस्. यदि तपाईं द्वारा एक उडान छ9छु, कम्तीमा पनि एयरपोर्टमा रहनु भन्दा तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ7नतिजा पछि तपाइँ पूर्व-बोर्डि Pro प्रक्रियाहरू र सुरक्षा जाँचहरूको माध्यमबाट जानुहुन्छ, यो विमान मा तपाईं को लागी लगभग समय हुनेछ.
ICE ट्रेनहरूको साथ, तपाईं प्रस्थान पहिले कुनै पनि समय पुग्न सक्नुहुन्छ जब सम्म तपाईं यसलाई सार्नु अघि ट्रेनमा बनाउनुहुन्छ. यो सम्भव छ किनकि त्यहाँ कुनै पूर्व-बोर्डिंग प्रक्रियाहरू वा लामो-घुमाउरो सुरक्षा जाँचहरू छैनन्. केवल स्टेशन देखाउँनुहोस्, सूचकमा तपाईंको ट्रेन पत्ता लगाउनुहोस्, र बोर्ड!
कुल यात्रा समय मा, आईसीई जर्मनीमा हवाइजहाजहरू जित्दछ, जसरी यसले पनि मूल्यमा गर्दछ. समयको साथसाथै पूर्व-बोर्डि procedures प्रक्रियाहरूमा बर्बाद गरियो, हवाइजहाज बढी समग्रमा हराउँछ घुम्ने समय यात्रामा (एयरपोर्टबाट सटीक स्थानमा).
2) सामान शुल्क. तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं सुटकेसहरूको लागि अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुहुन्छ यदि तपाईं हवाइजहाजमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने. यद्यपि, यदि तपाईं आईसीई बाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने ब्याज शुल्कहरू तिर्ने ट्रेनहरू अतिरिक्त खर्च हुन्छ यदि तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ भने तपाईं गर्नुहुने छैन सस्तो आईसीई ट्रेन टिकट. स्पष्ट गर्न, संग सस्तो आईसीई मूल्य, तपाईंले यात्रा गर्नुभएको कुनै पनि सुटकेसको लागि तपाईंले भुक्तान गर्नुपर्दैन. त्यसले आईसीईलाई सस्तो र उत्तम यात्रा विकल्प बनाउँदछ.
3) ट्रेनहरू बढी वातावरण मैत्री छन्. द ICE ट्रेन is also बढी वातावरण मैत्री हवाइजहाज भन्दा, जुन वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्‍याउँछ. रेल द्वारा यात्रा २० × कम कार्बन उत्सर्जन प्रदूषणयुक्त हुन्छ हवाले यात्रा गरेको भन्दा.
हैम्बर्ग गाडिहरु गर्न Bremen
हानोवर हैम्बर्ग गाडिहरु गर्न
कोलोन हैम्बर्ग गाडिहरु गर्न
ICE मा मानक कक्षा र प्रथम श्रेणी बीच के भिन्नताहरू छन्?
अन्य डिब्बेका लागि टिकटको साथ अन्य ट्रेनहरू विपरीत (मानक, व्यापार, कार्यकारी, आदि) Trenitalia मा जस्तै, जर्मनीको ICE केही फरक छ. त्यहाँ प्रत्येक ICE ट्रेनमा दुई कक्षा हुन्छन् - पहिलो वर्ग र दोस्रो कक्षा. दुबै कोटीहरूका बीचका मुख्य भिन्नताहरू मूल्य हुन्, flexibility, र सेवाहरू प्रदान गरियो.
यो आईसीई ट्रेन मा टिकट र वर्ग कम्पार्टमेन्ट को चिन्ता को रूपमा, कुनै टिकट प्रकार पहिलो श्रेणीमा हुन सक्छ. यसको मतलब त्यो पनि हो सस्तो आईसीई ट्रेन टिकट, सेभर मूल्य, र सुपर स्पार्पिसले पहिलो श्रेणीको सीटहरू खर्च गर्न सक्दछ. यद्यपि, दुवै वर्गका लागि मूल्य फरक हुन्छ, माथि देखाईएको छ.
प्रथम श्रेणी ICE टिकट:
ICE को प्रथम श्रेणी लक्जरीको लागि मानक सेट गर्दछ, सान्त्वना, र जर्मन रेलवे प्रणालीमा उत्कृष्ट सेवा. प्रतिद्वंद्वी हवाईजहाजको लागि डिजाइन गरिएको, ICE रेलहरूले लामो दूरीको यात्राको लागि सुविधा प्रदान गर्दछ. थप रूपमा, प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेन्ट ट्रेनको एक तिहाइ को बारे मा मेक अप र आईसीई लिई ट्रेन मा निर्भर गर्दछ धेरै भन्दा बढी डिब्बे हुन सक्छ.
प्रथम श्रेणीको डिब्बे सिटहरू ठूला छन् रaमा फरक तरीकाले व्यवस्था गरिएको छ 2-1 बरु एक भन्दा बढी व्यवस्था 2-2 दोस्रो कक्षा मा. र यसले यात्रुहरूको लागि बढी गलियारे ठाउँ खाली गर्दछ. यसबाहेक, ICE को पहिलो कक्षा मा सीटहरु पनि नक्कली छाला मा कभर छन् र दोस्रो कक्षा को भन्दा ठूला छन्. व्यवसायको रूपमा व्यक्ति सामान्यतया प्रथम श्रेणी प्रयोग गर्दछ, त्यहाँ यात्रुहरूको लागि दृढ टेबलहरू उपलब्ध छन् जो मार्गमा केही काम गर्न चाहान्छन्.
आईसीई ट्रेनहरूमा पहिलो कक्षा छुट्याउने अतिरिक्त सेवाहरू नि: शुल्क समावेश गर्दछ, दैनिक समाचार पत्र, नि: शुल्क असीमित WI-FI, र विशेष एम्पलीफायरहरू सेलफोन स्वागतमा अवरोधहरू रोक्न. प्रथम श्रेणी यात्रीहरूले आफ्नो भोजन तिनीहरूको सिटबाट पनि अर्डर गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरू रेलमा जहाजमा रेस्टुरेन्टमा जान चाहँदैनन्.
अर्को Perk सीमित पहिलो वर्ग यात्रीहरु मा सीमित छ सीट आरक्षण. प्रथम श्रेणीका लागि सबै टिकटहरू, सहित सस्तो आईसीई टिकटहरू, यस फाइदाको मजा लिनुहोस्. तपाइँ अनियमित रूपमा विन्डो सीट प्राप्त गर्ने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन; तपाईं बुकिंग गर्दा कुन सीट चाहानुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्.
अफेनबर्ग फ्रेबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
स्टटगार्टदेखि फ्रीबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
लाइपजिगदेखि फ्रीबर्ग ट्रेन मूल्यहरू
न्यूरेम्बर्ग फ्रीबर्ग ट्रेन मूल्यहरु
दोस्रो कक्षा आईसीई टिकटहरू:
दोस्रो क्लास कम्पार्टमेन्ट सुविधाजनक रूपमा पहिलो कक्षाबाट धेरै टाढा छैन. साथै, दोस्रो श्रेणीको डिब्बेमा सिटहरू औसत एयरलाइन्स सीट भन्दा राम्रो हुन्छन्. प्लस, ती एर्गोनोमिक हुन्, हेडरेस्टको साथ आउनुहोस्, र ढाँचा कपडा मा कभर छन्. यो एक आरामदायी लामो दूरी को यात्रा को लागी बनाउँछ.
त्यहाँ प्रथम श्रेणी वर्ग भन्दा ICE ट्रेन प्रति अधिक द्वितीय श्रेणी डिब्बाहरू छन्. खास गरी, दोस्रो कक्षामा बस्ने व्यवस्था पहिलो श्रेणीको डब्बा भन्दा अलि कडा छ. त्यहाँ प्रति प four्क्ति चार सिटहरू छन् (2-2 सीट व्यवस्था), प्रत्येक दुई सिटहरु बीचको मध्यस्थता साझा गरेर.
थप, दोस्रो श्रेणीका यात्रीहरूले केही सेवाहरू पहिलो कक्षामा मात्र सीमिततामा पहुँच गर्न सक्दछन्. उदाहरणका लागि WI-FI लिनुहोस्. दोस्रो कक्षा मा, वाइफाइ असीमित छैन जस्तो कि प्रथम श्रेणी यात्रुहरूको लागि हो. दोस्रो श्रेणीका यात्रीहरूसँग दैनिक अखबारमा नि: शुल्क पहुँच छैन त्यसैले यदि तपाईं दोस्रो कक्षामा अखबार प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले एउटा किन्नुपर्नेछ.
दोस्रो श्रेणीका यात्रीहरूले खाना पकाउन चाहन्छन् भने रेष्टुरेन्टमा जानु पर्छ. तिनीहरू आफ्नो सीटबाट अर्डर गर्न सक्दैनन् किनकी यो ICE प्रथम-श्रेणी डिब्बेमा छ. साथै, आईसीई दुबै फ्ल्याक्सप्रेसिस र सेभर भाडामा दोस्रो श्रेणीको टिकटहरू स्वत: सीट आरक्षण सुरक्षित गर्दैन. यदि तपाईं दोस्रो वर्ग मा एक सीट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले € of को अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्छ. यस्तै दुबै प्रथम श्रेणी र दोस्रो कक्षा यात्रीहरूका प्रत्येक सिटमा विद्युतीय आउटलेट हुन्छ.
नूर्नबर्ग बामबर्ग गाडिहरु गर्न
बामबर्ग गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
श्टुटगार्ट बामबर्ग गाडिहरु गर्न
ड्रेस्डेन बामबर्ग गाडिहरु गर्न
त्यहाँ ICE सदस्यता छtion?
ICE मा रेल पास प्रदान गर्दछ सस्तो आईसीई ट्रेन मूल्य जर्मनी वा यूरोप भरि असीमित यात्रा को लागी. त्यहाँ तीन प्रकारका रेल पास छन्:
जर्मन रेल पास जर्मनी भित्र असीमित यात्राको लागि हो. साथै, यो यात्रुहरूका लागि हो जो यूरोपमा बस्दैनन्, टर्की, र रूस. जर्मन रेल पासका केहि फाइदाहरू समावेश छन्:
रेल पासका धारकहरू जर्मनी बाहिर केहि बोनस स्थानहरूमा जान सक्छन् (सल्जबर्ग, भेनिस, र ब्रसेल्स)
अन्तर्गत सबैको लागि छुट ICE ट्रेन टिकटहरू 28 वर्ष
जर्मनीभर असीमित यात्रा
दुई व्यक्तिहरूले सँगै यात्रा गर्दा जुम्ल्याहा पास प्रयोग गरेर बढी पैसा बचत गर्न सक्दछन्
लचिलोपनले जर्मन रेल पासका धारकहरूलाई कुनै पनि समयमा कहिँ पनि यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ
जर्मन पासका होल्डरहरूले छनौट गर्न सक्दछन्3को 15 एक महीना भित्र लगातार यात्रा दिनहरु एक पास जब खरीद.
युरेल पासले गैर-यूरोपियनहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन रूस बाहिर रहन्छ, युरोप, र टर्की युरोप वरिपरि असीमित यात्रा गर्न. केही सुविधाहरू सामेल छन्:
पर्यटन आकर्षणका लागि भौचर र छुट.
विभिन्न कोटीहरू छनौट गर्नका लागि - वयस्क, वरिष्ठ, र युवा.
यस मार्फत असीमित यात्रा 31 युरोपेली देशहरूमा, टर्की सहित.
इन्टररेल पासले रूसमा बस्ने मानिसहरूलाई अनुदान दिन्छ, टर्की, वा यूरोप यूरोप भरि असीमित यात्रा. यस पासको पर्क्स समावेश गर्दछ:
छुट छ ICE ट्रेन टिकट दुबै जवान र ठूला मानिसहरूका लागि.
असीमित यात्रा 33 युरोप मा देशहरु
मुनि दुई जना बच्चाहरू मुनि यात्रा गर्ने पास पासहरूको लागि नि: शुल्क ट्रेन सवारी 11 वर्ष.
को लागी यात्रा अवधि3दिन सम्म3प्रत्येक व्यक्ति प्रति महिना.
प्रत्येक पास उपलब्ध छ र भित्र सक्रिय हुनुपर्दछ 11 खरीदको महिना.
कति लामो आईसीई ट्रेन प्रस्थान पहिले आइपुग्न को लागी?
निश्चित गर्न तपाई बोर्डमा समयमै आइपुग्नुहुन्छ, बसोबास गर्नु, र पनि पसलहरू ब्राउज गर्नुहोस्, तपाईंलाई कम्तिमा आइपुग्न सल्लाह दिइन्छ 30 तपाईको प्रस्थान समय भन्दा मिनेट पहिले.
आईसीई ट्रेन कार्यक्रम के हो??
ट्रेन कार्यक्रम तय गरिएको छैन, जसले उत्तर दिन गाह्रो बनाउँछ. यद्यपि, तपाईं बचत गर्न सक्नुहुनेछ ट्रेन ट्रेन होमपेजमा वास्तविक समयमा आईसीई ट्रेन कार्यक्रमहरू पहुँच गर्न. तपाईंको उत्पत्ति र गन्तव्य इनपुट गर्नुहोस् र सबै ICE ट्रेन तालिकामा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्. प्रारम्भिक ICE ट्रेन द्वारा छोड्छ6छु, हरेक छोड्ने ट्रेनहरूको साथ 30 मुख्य गन्तव्यहरूको लागि मिनेट.
कुन स्टेशनहरू ICE द्वारा सेवा पुर्‍याइन्छ?
ICE अन्तर्राष्ट्रिय मार्गहरू धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनहरू बाट छुट्छन्, ती मध्ये ब्रसेल्स मिडी जुइड (ब्रसेल्स मिडी दक्षिण स्टेशन अ English्ग्रेजीमा), अर्न्नेहम केन्द्रीय, र एम्स्टर्डम केन्द्रीय, र अरु धेरै.
आगमनको लागि, ICE ट्रेनहरू मा आइपुग्नुहोस् 11 जर्मन स्टेशनहरु र एक स्विट्जरल्याण्ड स्टेशन. साथै, प्रमुख आगमन स्टेशनहरु Oberhausen शामेल छ, डुइसबर्ग, डसेलडोर्फ, कोलोन, फ्रान्कफर्ट एयरपोर्ट (फ्रान्कफर्ट मेन एयरपोर्ट), म्यानहेम, सिगबर्ग, र अरूलाई.
थप, डसेलडोर्फ समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास र भावनाको साथ राइनको किनारमा अवस्थित एक सुन्दर शहर हो. त्यहाँ धेरै उल्लेखनीय सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आकर्षणहरू देख्न सकिन्छ र सुंदर मार्गहरू पदयात्रा र एक राम्रो किनमेल क्षेत्र को लागी. योaका लागि उत्तम स्थान हो सप्तान्तमा जानु साथी वा परिवार संग.
एम्स्टर्डम केन्द्रीय बाट (Centraal डच मा छ र यसको मतलब केन्द्रीय स्टेशन हो), तपाईं फ्र्याf्कफर्ट आउन सक्नुहुन्छ, शहर यूरोपको वित्तीय राजधानीको रूपमा परिचित छ. अरु के छ त, त्यहाँ छन् सुन्दर तटहरू, संग्रहालयहरु, र भ्रमण गर्न रेस्टुरेन्टहरू.
कोलोन कलाको केन्द्र हो, वास्तुकला, र धनी इतिहास. एम्स्टर्डम Centraal बाट एक ICE ट्रेन संग, तपाईं कोलोन पुग्न सक्नुहुन्छ यो शहरको सौन्दर्यमा डुबाउनको लागि.
साँच्चै, त्यहाँ अविश्वसनीय सुन्दर बोटानिक बगैंचा छन्, पाक मास्टरपीसको विस्तृत दायरा संग रेस्टुरेन्ट, चिडियाखाना, संग्रहालयहरु, र पब रमाईलो गर्न. साथै, यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कुन स्टेशन छनौट गर्ने हो, हाम्रो एल्गोरिथ्म तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्दछ.
हाइडेलबर्ग गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
श्टुटगार्ट हाइडेलबर्ग गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग हाइडेलबर्ग गाडिहरु गर्न
बन हाइडेलबर्ग गाडिहरु गर्न
ICE ट्रेन FAQ
मलाई के साथ आईसीईमा ल्याउने हो?
आफैलाई बाहेक? तपाईंको यात्रा कागजात साथ ल्याउनुहोस्, वैध पासपोर्ट, र यात्रा बीमा अनिवार्य छैन तर यो कागजात तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ.
कुन कम्पनीको आईसीईको स्वामित्व छ?
इन्टरसिटी-एक्सप्रेस (ICE) जर्मनीको राष्ट्रिय रेल प्रदायकको स्वामित्वमा छ, Deutsche Bahn, र DB जर्मन संघीय सरकारको स्वामित्वमा छ.
मँ ICE संग कहाँ जान सक्छु?
ICE मुख्य रूपमा जर्मनी मा सबै शहरहरु मार्फत चल्छ. त्यहाँ केहि अन्तर्राष्ट्रिय छन् ICE यात्रा मार्गहरू जर्मनीको सिमानामा रहेका केहि देशहरूमा.
आईसीई रेलहरूका लागि बोर्डिंग प्रक्रियाहरू के हुन्?
त्यहाँ कुनै पनि फ्यान्सी बोर्डिंग प्रक्रियाहरू छैनन्. जब तपाईं स्टेशन मा आइपुग्नुहुन्छ, तपाईंको ट्रेन फेला पार्न सूचक बोर्डहरूमा जाँच गर्नुहोस्. थप रूपमा, तपाईं त्यसपछि ट्रेन पनी कुनै पनि समय यो प्रस्थान गर्नु अघि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यहाँ के सेवाहरू आईसीई रेलमा छन्?
ICE ट्रेन ट्रान्जिट डाइनिंगमा प्रस्ताव गर्दछ जहाँ मेनूले भोजन समावेश गर्दछ, हल्का खाजा, र सबै प्रकारका पेय पदार्थहरू. यसबाहेक, त्यहाँ प्रत्येक सीटको छेउमा चार्जिंग पोर्टहरू छन्, निःशुल्क वाइफाइ (प्रथम श्रेणीमा असीमित), र निरन्तर सेलफोन रिसेप्शनको लागि एम्पलीफायरहरू (केवल पहिलो कक्षा को लागी).
सर्वाधिक अनुरोध गरिएको ICE FAQ – के मैले ICE मा अग्रिम सीट बुक गर्नु पर्छ??
तपाईंले अग्रिम सिट बुक गर्नु पर्दैन, तर तपाइँ सिट आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने. यदि तपाइँ प्रथम श्रेणी टिकट खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईं स्वत: एक आरक्षित सीटको लागि योग्य हुनुहुन्छ.
त्यहाँ ICE भित्र WiFi इन्टरनेट छ??
हो, त्यहाँ छ. दोस्रो श्रेणीको डिब्बेमा, WI-FI इन्टरनेट नि: शुल्क छ तर असीमित छैन किनकि यो प्रथम श्रेणीमा छ.
Konstanz Lindau गाडिहरु गर्न
Memmingen Lindau गाडिहरु गर्न
Lindau गाडिहरु गर्न Biberach
अलम Lindau गाडिहरु गर्न
अन्तमा, यदि तपाईं यस टाढा पुग्नुभयो भने, तपाइँ आईसीई रेलको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा जान्नुहुन्छ र मा तपाइँको आईसीई ट्रेन टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ SaveATrain.com.
के तपाइँ यस पृष्ठलाई तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल), वा तपाइँ केवल यस पृष्ठमा सीधा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ.